बाहिर जाने कलहरू प्रतिबन्धित: विशेष प्रयोग
जब हामी यस्तो बहिर्गमन कलहरू प्रतिबन्ध रूपमा उपयोगी समारोह हुन सक्छ? पनि पहिलो नजर मा, यस्तो अवस्थामा छैन त सानो हो। उदाहरणका लागि, तपाईं उहाँलाई आफ्नो सानो बच्चा उहाँले जहाँ सजग हुन पहिलो मोबाइल फोन छ किनेको। तर, हाम्रो बच्चा गल्ति केही $ 10 प्रति मिनेट को लागि "तातो वयस्कहरूको लागि लाइन" मा कल र परिवार बजेट गम्भीर क्षति सक्छ। वा तपाईंले सधैं एक घण्टा को लागि एक विदेशी देश र भाषण मा आफ्नो स्कूल साथीसँग दैनिक सम्पर्क चाहने एक हजुरआमा छ गर्छन्। वा शायद तिमी रोमिङ मा, तपाईं गल्ति घर कल गर्न चाहँदैनन् छन्।
यो बाहिर जाने कल छोडेर कल पूरा गर्न सम्भव छ जो द्वारा विधिहरू विचार गर्नुहोस्। तुरुन्तै एक सम्पूर्ण रूपमा फोन गर्न विस्तार यो मौका, र एक अलग सिम कार्ड साझेदारी गर्न लायक छ कि निर्धारण। पहिलो मामला मा यो उपकरण सेटिङहरू को स्थापना बाहिर छ। कल छोडेर (बाहिर जाने कल) सक्रिय मात्र संयोजन ** 33 * पासवर्ड # फोन डायल गर्न आवश्यक छ। "सुरक्षा", र यसैले "फोन पासवर्ड" - आवश्यक कोड प्रायजसो, मेनु वस्तु :. "सेटिङ" मा, अलग स्थापित छ यो कोड सिम कार्ड फरक छ र व्यक्तिगत विन्यास समारोह छ कि सम्झना हुनुपर्छ। संयोजन प्रवेश गरे पछि, तपाईं साधारण बहिर्गमन कल गर्न सक्षम हुने छैन। अब, छोडेर को बहिर्गमन कल कसरी असक्षम, भन्न गरौं। यो सिर्फ * # 33 # फोन पासवर्ड डायल गर्न पर्याप्त छ। आदेश * # 33 # अन्तर्गत हुन सक्छ प्रतिबन्ध उपस्थिति अवस्था जाँच गर्नुहोस्। साथै, सबै मोबाइल संचालक "बहिर्गमन कल प्रतिबन्धित।" सेवा प्रदान यो नवीनता फाइदा लिएर तपाईं बहिर्गमन पूरा रोकावट प्राप्त वा छानेर अन्तर्राष्ट्रिय कल र रोमिङ अक्षम। अब रूस मा सबै भन्दा साधारण मोबाइल अपरेटरहरु मा बाहिर जाने कलहरूको प्रतिबन्ध को समारोह विचार गर्नुहोस्।
त्यहाँ केही सरल विकल्प सक्रिय छन् "बहिर्गमन कल प्रतिबन्धित।" तपाईं "इन्टरनेट सहायक" प्रयोग र ग्राहकको व्यक्तिगत खाता "टन" मा आवश्यक मानकहरु सेट गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईं 111 नम्बरमा, वा फ्याक्स गर्न एक लिखित अनुरोध पठाउन 2119/21190 "" छोटो सन्देश पठाउन "को« एसएमएस सहायक प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर: 8 (495) 766 00 58. एकपटक जडान, तपाईं, डाटा विभिन्न प्रकारका चयन गर्न सक्नुहुन्छ आवश्यक प्रतिबन्ध निर्दिष्ट र समावेश गर्न * कोड * पासवर्ड # निम्न वर्ण को एक सेट प्रयोग गरेर यसलाई, त्यसपछि कल बटन थिच्नुहोस्। पासवर्ड सुरुमा सबै एउटै - 0000. बहिर्गमन कल ब्लक गर्न, तपाईँले यी विकल्पहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ:
- सबै बाहिर जाने - कोड 33।
- विदेश - 331।
- बाहिर जाने कलहरू गर्दा, विदेश रोमिङ रूस उद्देश्य अपवाद संग - कोड 332।
विभिन्न दर एक किसिम मा सेवा को मूल्य, र यो अपरेटर संग जाँच हुनुपर्छ।
प्रतिबन्ध बहिर्गमन "बीलाईन" कल सेवा आदेश को रूप मा लागू गरिएको छ। यो तपाईंलाई रोमिङ, अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता सबै कल, ब्लक गर्न जडान गर्न सक्नुहुन्छ। सेवा सक्रिय गर्न, बस नम्बर 06740951 वा संयोजन * 110 * 051 # र "कल बटन" डायल। मूल्य: जडान गरेर 3.5 rubles, हटाइयो मासिक शुल्क - 3,1 पृ। प्रति दिन।
भविष्यमा, निम्न छोटो आदेशहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ:
- सबै बाहिर जाने कलहरूको अवरुद्ध - * 33 * पासवर्ड # र "कल बटन"।
- रोक्नुहोस विदेश कल - * 331 * पासवर्ड # र "डायल"।
- * 332 * पासवर्ड # र "ट्यूब" - आफ्नो देशको लागि बाहेक सबै कल ब्लक गर्नुहोस्।
को "बहिर्गमन कल प्रतिबन्धित" सक्रिय सेवा कोड * प्रतिबन्ध को संयोजन प्रयोग गर्दछ * व्यक्तिगत पासवर्ड # र "कल बटन"
हाम्रो मामला मा, यी सान्दर्भिक टोली हो।
- 33 - बिल्कुल सबै बाहिर जाने कलहरू।
- 331 - अन्तर्राष्ट्रिय कल।
- 332 - बाहिर जाने रोमिङ कल (शायद मात्र रूस र तिमी कहाँ हो देश मा पुग्यो)।
साथै, त्यहाँ Android मंच लागि विशेष आवेदन छन्, र iOS, बाहिर जाने कलहरूको रोकावट अनुमति जसको लागि। उदाहरणको रूपमा जड कल प्रबन्धक मानिन्छ गर्न सकिन्छ। यसलाई तपाईंले बिल्कुल सबै बाहिर जाने कलहरू ब्लक गर्न अनुमति दिन्छ, र केही संख्या गर्न भनिएको छ। यो "काले सूची" तथाकथित। वा एक कल मात्र एक विशेष नम्बर (समारोह प्रत्यक्ष कल) मा अनुमति छ। यी कार्यक्रम सामान्यतया भुक्तानी गर्दै (लागत $ 5-10 को), तपाईं छोटो परीक्षण अवधि (अप गर्न 14 दिन) मा प्रकार्य परीक्षण गर्न सक्नुहुन्छ। नियम, आफ्नो बहुमूल्य कामको लागि आवश्यक मूल विशेषाधिकार, तर कार्य केही बिना पहुँच गर्न सकिन्छ। हामीलाई पनि "ब्ल्याकलिस्ट कल" को सुविधाहरू छलफल गरौं। हामी बाहिर जाने र आगमन कल र पाठ सन्देशहरू प्रतिबन्ध सुनिश्चित गर्न अर्को ठूलो कार्यक्रम बारे कुरा गर्दै छन्। र deadlocking को संभावना छ। तथापि, प्रयोगकर्ता सम्पर्क कल, र पोस्ट लेखक देख्न सक्छौं। एकै समयमा अन्य सदस्यताका लागि तपाईंको फोन "व्यस्त" हुनेछ। यो कार्यक्रम एक धेरै नै सरल र सुविधाजनक निवर्तमान इन्टरफेस छ उल्लेख गर्नुपर्छ। उपलब्ध ब्लक निजी (अज्ञात) संख्या।
गोंद सही जस्तै फोनमा सुरक्षा ग्लास? चरण निर्देशनहरूको द्वारा चरण
स्मार्टफोन Explay वेगा: समीक्षा र सुविधाहरू
Doogee भ्यालेन्सिया2Y100 प्रो: समीक्षा र विनिर्देशों
कन्वर्टर्स विशेष प्रयोग र चयन उपकरण आवृत्ति
पावलले Luspekaev: सोभियत अभिनेता को जीवनी र काम
"Vamp" को शैलीमा Fashionistas: मैनीक्योर रातो ज्याकेट
भित्री - एक व्यक्तिको आन्तरिक स्थिति प्रतिबिम्बित कोठा को भित्री ठाउँ छ
एक बच्चाको आवाज हराएको - के? कसरी व्यवहार गर्ने?
कसरी मखमल बिछाउने सिर्जना गर्न रोलर्स प्रयोग गर्न
उद्यमको प्रतिस्पर्धाको विश्लेषण। आधारभूत अवधारणाहरू
Gipsostruzhechnaya प्लेट - विशेषताहरु, स्कोप
गर्भावस्था को समयमा दन्त उपचार सम्भव छ!
Aconite - क्यान्सर को लागि एक उपचार। aconite को उपचार को लागि समीक्षा